दिनभरि ध’र्ना बस्छन्, बेलुका भोकै सुत्छन् उखु किसान ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारदिनभरि ध’र्ना बस्छन्, बेलुका भोकै सुत्छन् उखु किसान !
दिनभरि ध’र्ना बस्छन्, बेलुका भोकै सुत्छन् उखु किसान !
उखु खेतीका लागि जग्गा धितोमा राखेर कृषि विकास बैंकबाट लिएको १० लाख ऋणको व्याज बढेर म’र्नु बनाएको पी’र अलग रहेको रायले सुनाए ।‘मेरो पनि चारवर्ष अघिकै ४ लाख रुपैयाँ बाँकी छ’, उनले भने, ‘म पनि आ’न्दोलन गर्न दोस्रो पटक काठमाडौं आएको हुँ । पोहोर धर्ना दिन आउँदा लागेको १० हजार ऋण अझै ति’र्न सकेको छैन ।’रात पर्दै गयो, दिनभर माइतीघरको चिसो सडकमा ध’र्ना बसेका उनीहरु था’केका थिए । फेरि भोलि विहान उठेर त्यही माइतीघरमा ध’र्ना दिन जानु पनि थियो । ढोका भित्र र बाहिर उ’भिएका पाँचजना छे’वैको कोठा बी ०६ मा पसे । रामबाबु मण्डलले हामीलाई पनि बि’दाई गरेर कोठाको बत्ति नि’भाए ।